LLC समावेश गर्ने वा बनाइएको दायित्व संरक्षण
एकपटक तपाईंले एकजुट गरेपछि तपाईंले एक फरक र फरक कानूनी इकाई सिर्जना गर्नुभएको छ। तपाईं र तपाईंको नयाँ व्यवसाय इकाईले राज्यको कानुनको अधिकारलाई अधिकार दिईएको छ र तपाईं संलग्न हुनका थुप्रै फाईदाहरूको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ। यो केहि प्रशासनिक औपचारिकताहरूसँग आउँछ ताकि तपाईलाई भर्खरै चाहिन्छ जब तपाईंको समावेश हुन तपाईंलाई सेवा पुर्याउनेछ। तपाईंको व्यापार इकाई राख्नु सरल छ, त्यहाँ केहि जोडीहरू छन् जुन तपाईंको कर्पोरेट पर्दा राख्दछ।
"देयता संरक्षण कर्पोरेट इकाई स्थापना भएको र ठीक तरिकाले सञ्चालनको रूपमा मात्र बलियो छ।"
एकपटक तपाईं सँग एकपटक "कर्पोरेट भिडीयो" को सुरक्षा छ। एक कानूनी परिभाषामा यो दायित्वीय दृष्टिकोणबाट परिप्रेक्ष्य हो जुन तपाईंको कम्पनीले मात्र आफ्नो ऋण र दायित्वहरूको लागि उत्तरदायी छ र यसको मालिकहरू उनीहरूको आश्रित छन्। यो खेलमा आउँछ जब एक लेनदेनले तपाईंको निगम दायित्वको चुनौतीलाई व्यवसाय दायित्वको लागी कम्पनी मालिकहरूको सन्तुष्टि खोज्नको लागि चुनौती दिन्छ। त्यहाँ थुप्रै तरिकाहरू छन् कि कर्पोरेट पर्दा छेडिएको छ र हामी तिनीहरूलाई यहाँ राख्दछौं जब तपाई आफ्नो व्यवसाय समावेश गर्नुहुन्छ भने तपाइँ यसको कानुनी सुरक्षा अधिकतम गर्न सक्नुहुन्छ।
कर्पोरेट घडीलाई बलियो बनाउने
हामी केही उदाहरणहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छ जुन मामला कानूनसँग समर्थित हुन सक्छ जुन स्पष्ट रूपमा देखाउँछ जब कर्पोरेट पर्दाले व्यापार दायित्वहरूबाट एक कम्पनीको मालिकलाई सुरक्षित गरेको छ। बस समावेश गर्न पर्याप्त छैन, तपाईले आफ्नो व्यवसायलाई यसको स्वामित्व लिने कामबाट अलग गर्नु पर्छ। यो अत्यन्तै गाह्रो छैन र आधारभूत दिशानिर्देशहरू र प्रक्रियाहरू निम्नसँग जोड्न पछि तपाईंले विश्वमा सबै फरक पार्न सक्नुहुन्छ।
उचित संगठन: यो उदाहरण तपाईंको व्यवसाय को शामिल को वास्तविक कार्य हो। जाहिर छ यो ठीक देखि हुनुपर्छ। जब तपाईं आफ्नो व्यवसायमा आफ्नो व्यवसाय समावेश गर्नुहुन्छ, केवल आफ्नो लेख राज्य शुल्कसँग सचिवमा पेश गर्नु पर्याप्त छैन। व्यवसायको रूपमा समावेश गरिंदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ केही आधारभूतहरू छन् जुन ठाँउमा हुन आवश्यक छ। निगमहरूको लागि, जारी गर्ने स्टकले मालिक र व्यापारको पहिचानलाई अलग पार्न मद्दत गर्दछ। मालिकहरूको संगठनात्मक सभाहरूको रेकर्ड राख्दै र कम से कम एक वार्षिक आधारमा राख्ने एक राज्यको आवश्यकता हो। यदि एक अदालतले दोषपूर्ण समावेश देखाउँछ भने, यसले व्यापारको मालिकहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्दछ, तथापि भने अरू अन्य पक्षहरूमा असल विश्वास देखाइएको थियो र केवल एक मात्र बिन्दु गलत फेला पर्यो, त्यहाँ केही दायित्व सुरक्षा हुन सक्छ। यसले अन्य औपचारिकताहरूमा निर्भर गर्दछ र चाहे वे दोषी हुन्। त्यसो भए कि व्यवसाय समावेश गरिएको थियो र अल्पसंख्यक औपचारिकताको अपवादको साथ राम्ररी व्यवस्थित गरियो, एक अदालतले अलग-अलग पहिचान को मामला मा आवेदन गर्न को लागी अनुकूल हुन सक्छ। तपाईंको व्यापारलाई सही रूपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ, व्यवस्थित औपचारिक औपचारिकताहरु मार्फत आफ्नो कम्पनीलाई अलग-अलग बनाउनुहोस्।
ठेकाहरूको हस्ताक्षर गर्दै: यदि तपाईंले एक दस्तावेजमा मात्र तपाइँको नामको साथ साइन गर्नुभयो भने, यसले तपाइँलाई समावेश गर्नुभएको कुरा हुन सक्छ। यसको शर्तहरूसँग एक सम्झौता व्यक्तिहरूको रूपमा यसको पक्षले हस्ताक्षर गरेको अर्थ हो कि सम्झौता व्यक्तिहरूको बीचमा छ। यदि तपाईंको व्यवसाय समावेश गरिएको छ र अनुबंध व्यापार इकाई संग छ, जुन जुन चिन्हले हस्ताक्षर गर्दछ उनीहरूको हस्ताक्षर तल शीर्षक र इकाई नाम राख्न पर्छ। उदाहरणको लागि "जॉन डो, राष्ट्रपति - मेरो आफ्नै कम्पनी, इंक" सँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहोस् यसले स्पष्ट पार्दछ कि सम्झौताले व्यापारको तर्फबाट राष्ट्रपति द्वारा सहमति र कार्यान्वयन गरेको छ। यदि एक लेनदेन एक व्यक्ति को नाम र हस्ताक्षर संग अदालत को एक अनुबंध लिन्छ, कि त्यो लेनदेन हस्ताक्षर अधिकार को पछि लाग्न सक्छ। यो कर्पोरेट साधनको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। एकपटक तपाईले सम्बद्ध भएपछि, सधैँ सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुहोस्, स्पष्ट रूपमा कम्पनी र अन्य पार्टी बीच।
स्थिति अलग गर्नुहोस्: तपाईंले एकपटक समावेश गर्नुभएको बेला, तपाईंले एक नयाँ कानुनी व्यक्ति र केवल व्यापार अपरेटरहरूको कार्यबाट सिर्जना गर्नुभयो, यो फरक स्थिति सम्झौता गर्न सकिन्छ। एक लेनदेन अलग अस्तित्व को कमी देखाउन को लागी प्रयास गर्नेछ र मालिकहरु को व्यक्तिगत सम्पत्ति को संतोष को लागी पछि को लागी। एक अदालतले अलग अस्तित्वलाई कर्पोरेट रेकर्डहरूको समीक्षा गरी परीक्षा दिनेछ र हेर्नुहोस् कि यदि औपचारिकताहरू साथ-साथ गरीएको थियो र साथसाथै वित्तीय रेकर्डको समीक्षा गर्न निश्चय गरी निश्चित संस्था र स्वामीहरू बीचको रकमको सह-सम्भावना सुनिश्चित गर्न भने। यहाँ अर्को औपचारिकता पूंजीकरण अन्तर्गत हुनेछ, यो हुन्छ जब तपाईं अपर्याप्त पूंजीको साथ व्यापार दायित्वहरू पूरा गर्न एक व्यवसाय जोड्न सहमत भए। यदि यो मामला हो भने, अदालतले पत्ता लगाउन सक्छ कि कम्पनीको उदाहरण यस उद्देश्यको लागि सिर्जना गरिएको थियो र यो धोखाधडीमा देखा पर्नेछ।
राज्य आवश्यकताहरू: प्रत्येक समावेश व्यवसायलाई केही औपचारिकताहरू पछ्याउन आवश्यक छ। राज्यको आवश्यकता छ कि वार्षिक प्रतिवेदन, वा जानकारीको विवरण समावेशीकरणको सालगिरहमा दायर गरिएको छ। यो केवल एक बयान हो कि अधिकारीहरू, निर्देशकहरू र कहिलेकाहीं शेयरधारकहरू र कानुनी व्यापार ठेगानाहरू छन्। यदि यो औपचारिकता अनदेखी छ भने, तपाईंको सहभागिताको स्थितिमा तपाईंको खारेज रद्द हुन सक्छ। यो शायद सम्भवतः औपचारिक औपचारिकता र नामावली शुल्क संग।
जब तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कर्पोरेट पर्दा र सुरक्षा द्वारा प्रदान गरिएको प्रस्तावमा सम्झौता गर्न सकिन्छ कि कम्पनी गलत तरिकाले समावेश गरिएको थियो, एक सम्झौतामा misprespresed वा व्यवसाय र जो यसको स्वामित्व लिने बिना संचालित बिना। यो समावेश गर्न पछि यो तपाईंको व्यवसाय चलाउन एक धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
कर्पोरेट भिडीयो छेउ
यदि समय आउँछ भने तपाईंको संलग्न व्यवसायको विरुद्धको दावी कम्पनीको सम्पत्ति भन्दा ठूलो छ, तपाईंको कर्पोरेट पर्दा तपाइँको मात्र सुरक्षा हो। यो लेनदेन द्वारा शुरू गरिनेछ, जो कम्पनी मालिकहरु को विरुद्ध उपयुक्त फाइल र फाइल को व्यक्तिगत रूप मा जिम्मेदार ठहराने को लागी अनुरोध को लागी चाहिए। सामान्यतया त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन् जसले लेनदेनलाई कर्पोरेट पर्दा छिर्न प्रयोग गर्नेछ।
एगो थ्योरी बदल्नुहोस्: यो अस्तित्व अलग गर्न को लागि सही फिर्ता जान्छ। तपाईंले सामेल गरेपछि, आफ्नो व्यवसायलाई अलग इकाईको रुपमा सञ्चालन गर्न यो सिद्धान्त शून्य गर्न सक्दछ। यदि तपाईंले आफ्नो निस्क्रिय कारोबारको मालिकको मालिकबाट अलग र फरक इकाईको रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको क्रेडिटले यो सिद्धान्त प्रयोग गरी पछि लाग्न सक्दैन। यो कम्पनी चेकको साथ व्यक्तिगत बिल भुक्तानी गरेर साझेदारीकर्ताको रूपमा सरल हुन सक्छ। यसबाट बच्नको लागि, निश्चित गर्नुहोस् कि यदि तपाईंलाई केहि अतिरिक्त पैसा चाहिन्छ भने, यसलाई शेयरहोल्डर लाभांश वा वितरण मार्फत घोषणा गर्नुहोस्। तपाईंको विस्तृत र विस्तृत विस्तृत हो, यस सिद्धान्त को पछि लाग्न कठिन हुनेछ।
अन्डरकैपिटलाइजेशन: यो मूलतः धोखाधडी छ। यदि तपाईं लेनदेनलाई पराजित गर्न अपर्याप्त पूंजीको साथ एक व्यवसाय जोड्नु हुन्छ भने, तपाईंको कर्पोरेट पर्दा छेड्न सकिन्छ। यदि त्यो तपाईंको व्यवसाय को शामिल गर्न को लागी आधार थियो, त्यसोभए तपाईंले सम्भवतः कुनै अन्य औपचारिकताहरू पहिचान गर्नुभएन। प्रायः सानो व्यवसाय मालिकहरूले अनुमान लगाएअनुसार उनीहरूको व्यवसाय समावेश हुँदा रकमको रकम आवश्यक हुन्छ। तपाईलाई उत्प्रेरित गर्न र चलिरहेको एक ठोस योजना छ।
संक्षेपमा, र यो विषयको लागि, हामी यो मान्दछौं कि तपाई आफ्नो व्यवसायलाई राम्ररी समावेश गर्न योजना बनाउनु भएको छ र समावेश गरिएको संस्थाको फाइदाहरू कटाउन उत्सुक हुनुहुन्छ। केवल अलग-अलग सामानहरू, महत्त्वपूर्ण कार्यहरू र निर्णयहरू कागजात र कम्पनी कोष, कम्पनी कोष, र व्यक्तिगत धन, व्यक्तिगत धनराशिलाई राख्ने, तपाइँ कर्पोरेट पर्दा कसरी बिस्तृत गर्ने बारेमा सबै क्रेडिट सिद्धान्तहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ। लेनदेनको लागि यो गर्न कठिन छ, तथापि तिनीहरूले थाहा पाउनेछन् कि के खोज्न र अधिक व्यवसाय मालिकहरू गलत छन्। अझै पनि अदालतमा ठूलो चित्रमा धेरै दर्शकहरू छन् र यदि तपाईंको व्यवसाय समावेश गरिएको छ र सम्भवतः एक नाबालिग औपचारिकता निरीक्षणको साथ सञ्चालन गर्न, तपाइँ अझै पनि सीमित दायित्वबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ।
कर्पोरेट भित्रीलाई बलियो बनाउने
एक व्यवसाय समावेश गर्न को लागी व्यापारिक मालिकहरु राज्य र संघीय कानून द्वारा सुरक्षित छ कि तपाईंको व्यक्तिगत सम्पत्ति को व्यापार दायित्वों देखि बचाव गर्दछ। जब तपाईं सम्मिलित गरिएको छ, तपाईले तपाइँको व्यवसायलाई अप्रत्याशित देखि संरक्षण गर्न विचार गर्न सक्छ। यहाँ हामी संलग्न व्यवसायहरूको लागि विभिन्न स्तरको दायित्व सुरक्षाबारे चर्चा गर्नेछौं।
निस्क्रिय नगरिकन, व्यापार मालिकले 100% व्यापार दायित्व, ऋण, सम्झौता दायित्व र व्यापार गतिविधिसँग सम्बद्ध कुनै पनि कार्यक्रमको लागि हुकमा। एकपटक तपाईले सम्बद्ध गरेपछि, तपाईले व्यापारलाई व्यक्तिगत परिस्थितिबाट अलग पार्नुभयो र तपाइँसँग एक डिग्रीको सुरक्षा छ। निगमहरू र LLC को बीचको दायित्व सुरक्षाको तुलना गरौं र तपाईंको व्यवसायको सुरक्षाको थप उपायहरू पहिचान गरौं।
"व्यापार दायित्वबाट आफुलाई सुरक्षित राख्नु भनेको धेरै फन्टहरू सम्बोधन गर्नु हो जुन तपाईले व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षा गर्दछ ... बीमाले तपाइँको व्यवसायलाई सुरक्षित गर्दछ।"
व्यापार दायित्व संरक्षण: निगम बनाम सीमित देयता कम्पनी
जब यो व्यवसाय मालिकको व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू व्यवसाय दायित्वहरूबाट सुरक्षा गर्न आउँदछ, निगम र LLCले राज्य व्यवस्थाको माध्यमबाट समान सुरक्षा प्रदान गर्दछ। एक प्राथमिक भिन्नता भनेको एलएलएलको अदालतको अपग्रेडको लामो इतिहास हो। निगमहरू सयौं वर्षहरूको ट्रयाक रेकर्ड छ। कुनै पनि राम्ररी व्यवस्थित, सञ्चालन र रखिएको रखरखाव व्यवसाय संरचनाले व्यवसाय मालिकलाई व्यवसायिक गतिविधिसँग सम्बन्धित दायित्वहरूबाट ढाल गर्नेछ। अनि अनिवार्य अपर्याप्त औपचारिकताहरूलाई पछ्याउन महत्त्वपूर्ण छ र व्यापार र व्यक्तिगत सम्बन्धहरू बीच औपचारिक विभाजन राख्नुहोस्। त्यस पछि, तपाइँले तपाइँको व्यवसाय समावेश गरेपछि सुरक्षा प्रदान गर्न थप उपायहरू गर्न सक्नुहुनेछ।
जॉन एक फूल पसल मालिक छ जसले विदेशी, कठिन खोज्न र विशेषता फूलहरूलाई आफ्नो समुदायमा बेच्दछ। उनको व्यवसायले स्थानीयलाई उद्धार गर्दछ र विशेष घटनाहरूको लागि ठूलो आदेश लिन्छ। एक ढिलो वर्ष पछि, जॉनले आफ्नो क्रेडिट सीमा आफ्नो विक्रेताओं संग हिट गरेको थियो। सारा संसारबाट बिरुवाहरू र फूलहरूमा ल्याउन, यहाँ हजारौं डलर र त्यहाँका पुष्प पाइपलाइनको लागि केही हजार डलर लाग्ने। सवारी साधन भुक्तानी र भाडा भाडामा आफ्नो व्यापार दायित्वहरूको अर्को भाग बनाउन। जॉनलाई दिवालियापन दाखिल गर्ने र आफ्नो व्यवसाय घाँटी सामना गर्नु भएको थियो। उनको कुल कारोबार ऋणदाताहरुलाई ऋण, विक्रेताओं र सम्पत्ति मालिक $ 50,000 मा कुल। अब यो उदाहरणको लागि, हामी सबै राज्य हुनेछौं कि यूहन्नाले औपचारिक रूपमा आफ्नो व्यवसायलाई समावेश गरिएको ढाँचामा व्यवस्थित गर्नुभयो र यसलाई ठीक तरिकाले सञ्चालन गर्यो। जॉनको व्यक्तिगत सम्पत्ति, तिनको घर, वाहन, बैंक खाताहरू र कुनै पनि लगानीले व्यापार को काम पूरा गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्दैन। यस अवस्थामा, जॉन एक मानक निगम, एस निगम वा एक LLC हो भने यो फरक छैन। तथ्य यो तथ्य हो कि जॉनले व्यवसायलाई व्यवस्थित र समावेश गरेको थियो जसमा उत्तरदायित्व संरक्षणबाट आउँछ। एक कारवाही वा एलएलसीसँग यस मामलामा थप वा कम सुरक्षा छैन।
व्यक्तिगत दायित्व संरक्षण: निगम बनाम सीमित देयता कम्पनी
अर्को कोणबाट दुई एन्टिटिटीहरूको तुलनामा अर्को दृश्य लिन्छ। यस अवस्थामा, हामी मान्दछौँ कि तपाई, व्यवसाय मालिक व्यक्तिगत रूपमा मुकदमा हुन्छ। निर्णयमा खतरा हुने सम्पत्तिहरू जाँच गर्नुहोस्; वास्तविक सम्पत्ति स्वामित्व, बैंक खाताहरू, लगानी, वाहनहरू र कर्पोरेट स्टक। हो, तपाईंको स्वामित्वमा रहेको शेयरको शेयर निगम हो कि निर्णय पूरा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ एक LLC मा चासो, एक निर्णय को समयमा सम्मानित गर्न सम्पत्ति किने छैन। अब त्यहाँ चार्जिङ अर्डर भनिन्छ, जहाँ अदालतले अर्को पक्षमा एक LLC को मुनाफामा निर्णय लिन सक्छ। यो सम्भव छ, तर जटिल छ। यो अर्थ छ कि सम्मानित पार्टी LLC को मुनाफा को हकदार हो, तर रुको, यहाँ कैच छ - पार्टी केवल प्राप्त हुन्छ जो वास्तव मा वितरित हुन्छ। पर्खनुहोस्, यो खराब हुन्छ, सम्मानित पार्टी LLC मा लाभ को मात्रा मा तिर्न को लागी उत्तरदायी हुनेछ, चाहे वा कुनै पनि वा सबै लाभ वितरित गरिएको थियो। जो कि सम्पत्ति को बजाय एक दायित्व को निर्णय गर्नेछ। एलएलसीले व्यक्तिगत सूटबाट सम्पत्तिहरूको उच्च तहको सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। कर्पोरेट स्टक सम्पत्ति मानिन्छ, निगमले स्वामित्व समावेश गर्दछ।
व्यक्तिगत एक्सपोजर अपवाद
यद्यपि तपाईं आफ्नो व्यवसाय को जोड र राज्य र संघीय औपचारिकताहरु को अनुसार संचालित गरिए पनि, तपाईं अझै पनि एक व्यावहारिक स्थिति मा चलाउन सक्छन् जहां तपाईं आफैलाई व्यापार दायित्वहरु लाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यदि तपाईंले कुनै पनि कुराको लागि व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, एक ऋण, क्रेडिट लाइन, व्यापारी खाता आदि। कहिलेकाहीँ तपाईं व्यक्तिगत रूपमा ग्यारेन्टी गर्ने सम्झौतामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तपाईंको व्यापारिक संरचनाले तपाईलाई सुरक्षा दिन सक्नुहुन्न, व्यक्तिगत रूपमा, घटनामा व्यवसायलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन। सम्झौताका सर्तहरू। अर्को उदाहरण कर भुक्तानी गर्दैछ, जुन हामी सबैलाई थाहा छ। आईआरएसले कर तिर्न, व्यवसाय वा अन्यथा घटनामा जिम्मेवार पक्षलाई पछ्याउनेछ।
मालिक र प्रबन्धक सम्झौता
तपाईले सम्बद्ध गरे पछि तपाईंको व्यवसायको संगठनसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण तत्व, राम्रो तरिकाले दस्तावेजहरू र बङ्गलाहरू सम्पादित छन्। यो तपाई कहाँ छ कि कम्पनी कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ र प्रबन्धकहरूलाई शक्ति आवंटन गर्दछ। उदाहरणको लागि, दुई प्रबन्धकहरूद्वारा संचालित एक LLCले अपरेन्टिङ् सम्झौतामा एक क्लोज हुन सक्छ जुन भन्छ कि कुनै पनि व्यवस्थापकले ब्यूँझ्नेहरूसँग स्वीकार्य सहमति बिना $ 10,000 भन्दा बढी व्यापार गर्न सक्छन्। यदि आन्तरिक कम्पनी कागजातमा अनुमति दिइएको रकम भन्दा बढीमा कुनै पनि अनुबंध निष्पादित गरिएको छ, यो एक अवैध लेनदेन हो, जहाँ सम्झौताको हस्ताक्षर प्राधिकारी दायित्वहरूको लागी उत्तरदायी हुन सक्दैन र व्यापार छैन। यसले जटिल परिस्थितिको सामना गर्न सक्छ, तथापि तपाईं विस्तृत सम्झौताहरू र बङ्गलादेशहरूद्वारा साझेदार र कर्मचारी कार्यहरूसँग दायित्व सीमित गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ कि कति रकम, वा व्यय व्ययको लागि मुआवजा कम्पनीमा कुनै पनि व्यक्ति वा आयोजित स्थिति हुन सक्छ। यदि तपाईंको अपरेन्टिङ् सम्झौता वा कर्पोरेट बयूक्तहरूले मात्र एक हस्ताक्षरको साथ कम्पनीको चेक लिखित गर्न सकिन्छ भने, तपाईं खराब निर्णय निर्णयको लागि आफ्नो जोखिम सीमित गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एक कम्पनीको मालिक वा प्रबन्धकले $ 10,000 भन्दा कम हस्ताक्षरको लागि मात्र चेकको लागि साइन इन गर्न सक्छ भने दुई हस्ताक्षर बिना, तपाईं थप सुरक्षालाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। यी प्रकारका क्रियाकलापहरू सबै व्यापारको आन्तरिक दस्तावेजमा, जस्तै कार्यकारी सम्झौताहरू र कर्पोरेट बयौलहरूको लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ।
त्यसोभए तपाईले राम्ररी व्यवस्थित गर्नुहोस्, विस्तृत विवरणको साथ तपाईको आन्तरिक कागजातमा व्यवस्थित गर्नुहोस्। जब आपदा प्रहार हुन्छ तब के हुन्छ? आगो, बाढी, वा आपराधिक कार्य? यो जहां बीमा खेल्दछ। यसको बिना, तपाईं इन्वेंट्रीको हानिको सामना गर्न सक्नुहुनेछ जुन सानो व्यवसाय अन्तर्गत राख्न सक्छ। सायद एक घटनाले व्यवसायलाई बलियो बनाउनको लागि धेरै महिनाको लागि बन्दको ढोका बन्द गर्दथ्यो, जुन सजिलै एक सानो व्यवसायमा ढोका बन्द गर्न सक्छ।
बीमा अन्य क्षेत्रमा सीमित दायित्वलाई मद्दत गर्न एक महान उपकरण हुन सक्छ। त्यहाँका टनहरू, उत्पाद दायित्व, चोरी, आगो र बाढीहरू छन्। कर्मचारी र कार्यस्थानले व्यवसायलाई ठूलो दायित्वमा बेवास्ता गर्दछ जुन सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसको सकारात्मक समाधान खोज्नुमा तपाईको आवश्यकता संग काम गर्दछ र जिम्मेवारीको लागी मात्र पर्याप्त बीमा मात्र हुन सक्छ।
शामिल को लाभ
राज्य छनौट गर्नुहोस्
व्यापारिक प्रकारको तुलना
कसरी समावेश गर्ने
अनलाइन शामिल गर्नुहोस्
सीमित देयता कम्पनी (LLC)
LLC बनाम एस-निगम
नेवाडा व्यापार लाभ
एक गैर नाफा संगठन कसरी शुरू गर्ने / निगम - परिभाषा र उदाहरणहरू
स्वामित्वको स्थानान्तरण गर्नुहोस्
के हो नि?
कहाँ शामिल छ
के म समावेश गर्दछु?